I-Facetune 2, ukuvela ngokuthe ngqo kwirejista yemali | IPhone iindaba
I-facetune ngokungathandabuzekiyo yenye yezicelo eyeyona iphumelele kakhulu kwiVenkile yeApple kule minyaka imbalwa idlulileyo, kuba isinike ithuba lokuphucula iifoto ezithathwe nge-iPhone kwimizuzwana nje ngendlela elungileyo kwimizuzwana. Ngoku i-Lightricks ibuya nohlelo lwesibini olusizisela okuhle kodwa kunye nokuphucula okungathandekiyo.
Ukufika kohlelo lwesibini lweFacetune kukhatshwa ngumsebenzi ofunwa kakhulu ngabasebenzisi benguqulelo yokuqala, kwaye ayisiyiyo enye ngaphandle ukuhlela bukhoma. Oko kukuthi, ngalo lonke ixesha sisenza utshintsho ku-retouching, siza kuyibona ngalo mzuzu, ngaphandle kokulinda nokuba sithathe ifoto kwaye ke oko kukhokelela kulondolozo lwexesha elibonakalayo xa sisenza ukuphinda-phinda ukuphinda-phinda ngokuxhomekeke kwisimo ifoto.
Olunye uphuculo olubonakalayo lwesicelo siseto esitsha (ngakumbi ukukhanya okunamandla kokufota) esivumela oko yiya phambili kancinci xa ulawula ukubonakala komntu esimphindayo. Ukongeza i-Lightricks yongeze inkqubo ebuyisela ubuso bethu kwi-3D ukuze ikwazi ukwenza uhlengahlengiso olungenakwenzeka phantse kuso nasiphi na esinye isicelo kokubini somgangatho kunye nokuchaneka.
Kwaye kulapho ingxaki ivela khona, kwaye nalapho abasebenzisi bangene emsindweni. Endaweni yokubonelela ngesicelo esipheleleyo kunye nazo zonke izixhobo zalo ngexabiso elimiselweyo, iiLightricks zikhethe iimodeli ezimbini ezahlukeneyoSingazithenga izinto zokuchukumisa umntu ngamnye (okukhokelela kwibhili enkulu) okanye singarhumela kwisicelo samaxabiso abonakala ngathi aphakamile kunabantu abawabonayo.
Imirhumo ebonelela ngokufikelela ngokupheleleyo iya kwi-1,99 euro ngenyanga, I-9,99 euros ngonyaka okanye ii-euro ezingama-29,99 zobhaliso lobomi bonke, amaxabiso anokuthetheleleka kodwa ukuba silandela umkhwa wentengiso oqhelekileyo unokuthathwa njengophezulu kakhulu. Kwaye yinto abasebenzisi abangayiphosanga, kuba uphononongo lwesicelo luqokelela izimvo zenkwenkwezi ekhalaza malunga nemodeli entsha yeshishini ebekwe yiLightricks kunye namaxabiso asethwe yinkampani kwisicelo.
Inyani yile xa ubeka umfanekiso kwakhona, esi sicelo akanalo olwa naye ngokwesantya / umlinganiselo weziphumo. Ixabiso lomntu oyisebenzisayo encinci linokugqithisa, kodwa kuyinyani ukuba xa uyinika ukusetyenziswa okuqhubekayo ekugqibeleni sithetha ngaphantsi kweyuro enye ngenyanga, evakala ifanelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Facetune 2, ukuvela ngokuthe ngqo kwirejista yemali
Kuyandihlekisa ukuba ukhusele olu hlobo lwento. Akunazintloni! Kwaye ngaphandle kokubala bonke abantu esele bahlawule ngohlobo lwangaphambili. Ngabantu abanjeya bazokuqhula ubomi bethu bonke, icacile
Inguqulelo entsha yeefoto zewebhu app ngoku ziyafumaneka kuye wonke umntu kwi-icloud.com